Ahoana ny fomba fanamoriana ny tatatra kafe - Ikkaro
firosoana >> Cómo hacer >> Drainer ho an'ny kapsily kafe
Fomba fanamboarana tatatra avy amin'ny tavoahangy
Izaho dia manana tatatra vita amin'ny tavoahangy Coca Cola iray litatra ary io no refy lavorary.
Mila manapaka azy fotsiny ianao amin'ny haavony mety araka ny ahitanao ny sary.
Ary apetraho eo ambany ny tapany. Azoko atao ny mifanaraka amina kapsily 2 izay rava ao. Noho ny bikan'ny tavoahangy, ny karazana kapsily rehetra amin'ny marika dia mifanaraka tsara.
ny tombontsoa avy amin'ity tatatra ity Izy ireo dia:
dia tena tsotra sy mora vidy
manadio tena mora foana
Manompo amin'ny karazana kapsily rehetra (Dolce Gusto, Nespresso, Tassimo, Mercadona, sns)
Raha mila zavatra mivoatra kokoa ianao. Rano misy famolavolana tsy mifandona ao an-dakozanao jereo ireto fizarana manaraka ireto miaraka amin'ny sasany natao ho an'ny mpanonta 3D na vokatra marika
Fomba fanamboarana colander lehibe amin'ny kapsily maro
Afaka mampiasa kaontenera mahazatra izahay noho izany, fa ny fromazy Apetina avy any Arla kosa no omeko (amin'ny Amazon). Ampiasako ho an'arivony zavatra izany container izany.
Mitrandraka trondro ao anaty tanky mandritra ny fanadiovana azy
avela hilatsaka ny vilany
ary ho an'ny kapsula kafe
Raha izany dia ratsy tarehy izy nefa miaraka amina sosona volondavenona sy mainty na izay tianao dia tsara.
Tsy azoko aseho anao ny ahy satria any anaty hidim-baravarana izahay ary tsy ananako eto.
Fa raha tsikaritrareo dia mitovy aminy ihanycurridores ara-barotra avelako eto ambany ianao.
3D Drainers vita pirinty
Tena tsara izy ireo. Misy ny sasany tena manan-tsaina ary maro hafa izay toy ny tavoahangy nampiasako nefa natao pirinty tamin'ny 3D.
Ny tombony dia ny fanananao fitaovana tsara tarehy kokoa. Ny lafy ratsy dia ny hoe mila manana mpanonta 3D ianao na manontany olona fantatrao hoe manao izany.
Eto aho mamela ny valin'ny lalan-drano ho an'ny Dolce Gusto ao amin'ny Thingiverse. Avy amin'ny toerana ahafahanao misintona ny endrikao sy manonta azy
Manana ny safidinao foana ianao Mitadiava fitaovana fanampiny ao amin'ny magazay sy dmividy azy ireo. Tsy dia misy firy, fa ny sasany hitanao. Io ilay safidy tiako indrindra, fa avelako ho anao raha manampy. Na raha manampy anao hahazo aingam-panahy izany ary mamorona zavatra.
Kapsily vaksina vita amin'ny tanana avy hatrany
Ity dia hevitra izay noeritreretiko hatry ny ela. Izy io dia misy ny fanaovana amin'ny fantsika, na ny faritra fanapahana sasany, fitaovana iray izay manindrona haingana ny kapsily ary manary azy eo noho eo.
Raha tokony avela hilatsaka izy dia atsipiny ao anatin'ny iray na roa segondra.
Fomba fanodinana kapsula
Eto aho dia te-hanavaka ny fanodinam-bola lehibe amin'ny orinasa sy ny fanodinana entana azontsika atao amin'ny sehatra tsirairay.
Amin'ny ambaratonga lehibe
Na dia misy aza ny orinasa sasany manisy teboka hanangonana kapsily ary hamerina hamerina azy ireo, ny tena izy dia very maina ny ankamaroan'ny kapsily ary sarotra be ny fanodinana ireo izay azo.
Amin'ny ambaratonga tsirairay
Azontsika ampiasaina indray ireo plastika, amin'ny asa-tanana samihafa, fa amin'ny farany dia tsy maintsy hatsipintsika izy ireo, noho izany dia fomba iray fotsiny hanitarana ny olana.
Ao amin'ny kapsula aluminium Nespresso dia mbola azontsika natao ny nanasaraka ny aliminioma ary nandronika azy ireo. hampiasa an'ity aliminioma ity amin'ny fanandramana sasany. Izy ireo dia TSY vahaolana lehibe, tsy vokatra tiako hatao na inona na inona izany.
Tsy hampiasa ireo karazana mpanamboatra kafe ireo aho.
Ny olan'ny kapsily sy ny tontolo iainana
Tsy zava-baovao izany mpanamboatra kafe tokana izany.
Kapsula an-tapitrisany no ampiasaina isan'andro. Amin'ny 9 grama isaky ny kapsily dia 6 grama ny kafe ary fonosana na fonosana 3 grama. Rehefa manangona habe kely toy izany isika dia mila fitaovana betsaka kokoa noho ny raha fonosantsika kafe 1 kg.
Raha te-hisotro kafe 1 kg dia mila kapsola 110 eo isika, ary tsy isalasalana fa olana eo amin'ny tontolo iainana izany.
Satria samy sarotra ny mamerina ny aluminium sy ny plastika Nespresso satria mifamatotra amin'ny sivana. Ary indrindra fa ny ampahany betsaka amin'ny kapsula dia lasa very maina.
Capsules vs milina espresso
Raha tsy te hampiasa kapsily tokana ianao dia manana ilay mpanao kafe italiana nentim-paharazana. Raha tsy tianao dia mieritreritra ianao fa tsy maintsy miandry ela loatra, satria manana safidy hividy milina espresso koa ianao (avelako ianao ny sasany avy amin'ny amazona Ho hitanao)
Ny tombony azo amin'ny Expresso, ankoatry ny kalitaon'ny kafe dia ny fampiasana kafe an-tany ianao, ka manjavona ny olan'ny kapsily.
1 Fomba fanamboarana tatatra avy amin'ny tavoahangy
2 Fomba fanamboarana colander lehibe amin'ny kapsily maro
3 3D Drainers vita pirinty
4 Rano fivarotana
5 Kapsily vaksina vita amin'ny tanana avy hatrany
6 Fomba fanodinana kapsula
6.1 Amin'ny ambaratonga lehibe
6.2 Amin'ny ambaratonga tsirairay
7 Ny olan'ny kapsily sy ny tontolo iainana
8 Capsules vs milina espresso